लोडसेडिङ फन्डा !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
लोडसेडिङ फन्डा !
पुस १३, २०६९
दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङको नयाँ तालिका भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट अवकास लिन आनाकानी गरिरहेका बाबुराम भट्टराईले कुनै बेला भनेका थिए, 'यो वर्ष दिनको १० घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने छैन ।' प्रधानमन्त्रीले यस्तो भाषण गर्दा उनी छिमेकी भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको अतिथि बनिसकेका थिएनन् । तर जब उनी बिहार भ्रमणमा गए, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले त्यसको केही महिनापछि हाम्रा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई माथ खुवाउने गरी भाषण गर्दिए, 'हामी बिहारमा बिजुली बत्तीको समस्या समाधानमा लागिपरेका छौं । लोडसेडिङ हटाउन सकिनँ भने, म अर्को साल विधानसभा चुनावमा उठ्ने छैन । यदि म उठें भने पनि तपाईंहरु भोट नदिनुहोला ।' भन्नु पर्दैन कि पछिल्ला वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि बिहार लोडसेडिङको समस्याले ग्रस्त छ ।
धेरैलाई लाग्ला हाम्रा विद्वान् प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशका एकजना मुख्यमन्त्रीलाई गजबको सुझाव दिएर आएछन् । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पीडा कसले बुझ्छ ? नितिश कुमारले फ्याट्ट फोन गरेर, 'तपाईं चाहिँ लोडसेडिङ नघटाए के गर्नुहुन्छ ?' भनेर सोध्दिए भने के गर्लान् हाम्रा प्रधानमन्त्री कमरेडले ?
प्रकाशित : पुस १४, २०६९ १५:५७
अभि सुवेदी लेखक
पछिल्लोपटक कुन पुस्तक पढ्नुभयो ?झलक सुवेदीको 'बि्रटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा' पढिसक्याएँ । अहिले सल्मान रुस्दीको 'जोसेफ एन्टोन' पढिरहेको छु ।
पछिल्लोपटक कुन पुस्तक पढ्नुभयो ?
झलक सुवेदीको 'बि्रटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा' पढिसक्याएँ । अहिले सल्मान रुस्दीको 'जोसेफ एन्टोन' पढिरहेको छु ।
कस्ता खालका पुस्तक बढी रुचाउनुहुन्छ ?
मेरो पुस्तक छनोट जटिल हुन्छ । रुचि, आवश्यकता, अरू केही लेखनलाई चाहिने सन्दर्भ साम्रगीका थुप्रै किताब र लेख । मेरो रुचिचाहिं काव्यात्मक भाषामा लेखिएका निजी अनुभवलाई राखेर जीवन जगत् हेर्ने किताबमा छ ।
नेपालीमा कस्ता पुस्तक लेखिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ ?
नेपालीमा धेरै समय टुक्र्याएर, गफ धेरै हालेर, लेख्न थाल्दा नै आफूलाई विशाल चिन्तक हुँ भन्ने ठानेर लेख्ने प्रवृत्ति हराओस् । इमानदार कृतिहरू लेखियून् ।
मन परेका लेखक र पुस्तक ?
धेरै छन् । मलाई आजकल खगेन्द्र सङ्ग्रौलाका कथा, अङ्ग्रेजी मूल भाषा नहुने एसियाली र अरू मुलुकका कविले लेखेका कविता, केही नेपालमा निस्केका इमानदार उपन्यास जुन निकै छन्, अनि अङ्ग्रेजीमा चर्चित किताब मन पर्छन् ।
लेखकलाई केले राम्रो र नराम्रो बनाउँछ ?
लेखकलाई सरलता, आडम्बरहीन र डग्माविहीन मनस्थितिले राम्रो बनाउँछ । हामीसँग त्यो बिस्तारै हराउँदै छ । धर्म, गु्रप र ठोकुवा विचारमा कुद्ने भीडका लेखकको आपmनो भन्नु केही हुँदैन । आडम्बरले छोपिएको निरीहपन एउटा भयानक लोन्लिनेस् हो ।
नयाँ पुस्ताले पढ्नुपर्ने पुस्तक ?
स्वतन्त्र किताब । समयको लहरमा आएका सार्त्रले भनेका केराजस्ता सिध्दिजाने मात्र होइन आपmनो पुस्ताको कल्पना र विश्वास बोकेका किताब पढ्नुपर्छ ।
किताब नभए जीवन कस्तो होला ?
थाहै हुँदैन किनभने ती मूर्खलाई के गुमाएँ भन्ने थाहै हुँदैन । अभाव त कामना हो र पाउने संघर्ष, किताब नहुँदा ती दुवै जान्छन् ।
कुन समयमा सबैभन्दा बढी पुस्तक पढ्नुभयो ?
अहिले र धरानमा विद्यार्थी राजनीति गर्दा भएको आत्मबोधको बेला । त्यो मेरो जीवनको सब्लाइम् क्षण थियो ।
महिनामा कति पैसा किताबमा खर्च गर्नुहुन्छ ?
अब पिल्सिङ्बाट जीवन चलाउनुपर्ने लेखरचनाको पारिश्रमिक पाएको बेला किन्छु ।
पुस्तक के गरी छनोट गर्नुहुन्छ ?
मलाई किताबको संसार खुलेर मतिर सरासर आउँछ । केही समस्या पर्दैन ।
प्रकाशित : पुस १४, २०६९ १५:५९
कहाँ छन् युनिसहरू ?
रुबिना क्षेत्री , क्रिकेटर
द ब्याटिङ गड